Ny sensor LiDAR dia ho an'ny iPhone 13 Pro | Vaovao IPhone
Ny sensor LiDAR dia ho an'ny iPhone 13 Pro ihany
Ny tsaho momba ny fakantsary sy ny sensor LiDaR an'ny maodely iPhone 13 vaovao dia efa ela no nipetraka ambony latabatra ary ankehitriny araka ny nohazavaina tamin'ny sioka iray nataon'ny manam-pahaizana momba ny fivoahan'ny teknolojia DylanDKT, iPhone 13 Pro maodely ihany no hanana an'ity sensor ity.
Toa ny maodely kely iPhone 13 na iPhone 13 no ho tavela amin'ity sensor ity, toa ny maodely ankehitriny. Toa nanampy azy ireo fotsiny i Abela satria izy koa dia nanao izany tao amin'ny iPad Pro tamin'ity taona ity.
Fitaovana manokana ho an'ny sehatr'asa Pro iPhones
Ny sensor LiDAR dia tonga voalohany tamin'ny fitaovana Apple niaraka tamin'ny fampiharana azy tamin'ny iPad Pro tamin'ny taon-dasa ary nampiana tamin'ny maodely iPhone 12 Pro sy iPhone 12 Pro Max. Toa hitohy hatrany izany ary Apple dia tsy mikasa ny hanampy ireo sensor ireo amin'ny ambiny modely iPhone izay ho tonga amin'ity taona ity.
Tamin'ny sioka vaovao navoakan'i DylanDKT omaly antoandro dia nanazava izy fa ity LiDAR ity dia tsy hahatratra ireo maodely Pro amin'ilay maodely iPhone manaraka fotsiny:
LiDAR dia ho tonga amin'ireo maodely pro iPhone ihany. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia toa te hamoaka ny maodely iPhone 13 / 12S rehetra amin'ny LiDAR i Apple saingy noho ny antony iray na antony hafa dia tsy hitranga amin'ity taona ity.
- Dylan (@dylandkt) Jolay 11 2021
Ny LiDAR izay midika hoe: "Detection light and ranging or Laser Imaging Detection and Ranging" Hazavaina amin'ny fomba tsotra ny laser mikapoka izay mamela handrefesana ny halavirana na ny velaran'ny toerana, toerana na zavatra mamela azy ireo hisolo tena azy ireo ary tena tsara izany saingy marina fa mpampiasa maro ny iPhone 12 Pro na Pro Max aza miafara amin'ny fampiasana azy. Ny tsaho momba ireo maodely iPhone vaovao dia manondro fa ireo koa dia hanampy LiDAR ho an'ny mpomba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny sensor LiDAR dia ho an'ny iPhone 13 Pro ihany
WhatsApp dia mamela anao handefa sary izay ho hita indray mandeha ihany
Ny mini iPad vaovao dia namboarina indray taorian'ny fahavaratra